Immobiliser ingenye ephumelela kunazo anti-theft izindlela ukuthi wake yasungulwa onjiniyela yezimoto. Umgomo we operation zedivayisi ulula. Uma umhlaseli uzama yona ishayele imoto ize, amabhlogo kudivayisi amayunithi eyinhloko umshini. Okunjalo izindlela eziphumelelayo ukuvikela imoto ayikwazanga ukunganakwa izinkampani zomshuwalense. Ezinye zazo uyavumelana angena esivumelwaneni ku isinxephezelo wokunakekela ukweba kuphela lapho nezimoto ezifakelwe immobiliser.
Kanjani imisebenzi kudivayisi, kungani siyidinga ukhiye immobiliser uchungechunge?
Owabona lesi senzakalo ayikwazi ukuthola khona lesivikelo emotweni. Akenzi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana noma yiziphi izimpawu umsindo noma ukukhanya. Idivayisi usebenza kufihlwe ngokuphelele prying amehlo kuze izindlela zokuzivikela kuzokwethulwa. Nayikuthi iselelesi uyakwazi ukuthola baphule lolu cingo, ngisho kuleli cala, zonke uhlelo imoto efanele avimbelwe. Nokho, kulesi simo, kuphakama izinkinga umnikazi samanje emotweni, okuyinto has a charm-immobilizer. It ikuvumela ukukhubaza uhlelo Ukuvikelwa.
Kuyadingeka esikhulumi ukwenaba ncamashi amasayithi avinjiwe yidivayisi. Uma umhlaseli ukungena ingaphakathi imoto kanye nokufinyelela kudeshibhodi, lapho ungazama ukuqala injini. Kulokhu, idivayisi wenza ngokuzenzakalelayo ukusebenza Ilokhi ye izinhlelo eyinhloko umshini:
Ngenxa yalokho, imoto enqaba ukuqala. Nqamula izindlela ukuzivikela ngokusebenzisa akude Izilawuli immobiliser ehlelwe operation imoto. Emva kokuthola isiginali kusuka imoto aphethe uphindela isimo ezisebenzisekayo.
Ungaba njengekhampasi alamu esikhundleni immobiliser?
Idivayisi sigcwalisa i-alamu, kodwa awukwazi ngokuphelele esikhundleni salo. Idivayisi akulona isaziso umnikazi mayelana umsebenzi lokuduna imoto. Uma kwakuba khona sehlakalo, kungenzeka ukuthi liyophangwa ngesikhathi imoto itholwa. Amasela angase bephazamisa ukubaluleka ngaphakathi emotweni, ukweba ibhethri kanye neminye imininingwane. Nale indandatho immobiliser Vaz imoto noma omunye umnikazi brand akusho ukuthumela imilayezo. Idivayisi usebenza ngaphandle impendulo. Yazisa mayelana amaqiniso lokweba ungenziwa kuphela ezikhethekile alamu izinhlelo.
Ukuthola kwe-immobiliser - kakhulu umsebenzi isikhathi esiningi ukuze umhlaseli. Ezinye ukushintshwa abandakanye okungenani 10 amadivayisi amancane, zenziwe uhlelo olulodwa kanye nokulawula wiring imoto. Kwesinye isikhathi amadivayisi ezifakelwa ngqo emabhuloki ukuphepha. Uma umnikazi imoto ine immobiliser esheyininikhiye Starline, kungaba azolile isikhathi esingaphezu impahla yabo. Imoto yakhe ifakwe kwakha isimiso esiyinkimbinkimbi ezinjalo. Nakuba professional imoto amasela ayakwazi sizame ukunqoba isenzo kohlelo Ukuvikelwa, ihlele ukuqeda kubo kungaba ezingavamile kakhulu. Ngokuvamile ukungaqaliswa kokusebenza zonke izinzwa kuba banal isikhathi esanele.
Yini izingxenye ayingxenye immobiliser
uhlelo lokuvikela kuhlanganisa izingxenye ezinkulu ezintathu:
ukhiye (tikhatsi tetifundvo ukhiye ezinegama).
I-control unit iyona element eyinhloko uhlelo futhi unesibopho ukusebenza zedivayisi. Khubaza amandla chain key immobiliser. Tag okuyinto liqukethe, idivayisi uchazwa. Ngemva kwalokho, umnikazi uthola ukufinyelela umshini.
udlulisela kagesi Electric Networks kuvula phezu kokuthola isibonakaliso, okuholela umshini kuziwa esimweni baxhashazwe. Key-Fob wumkhakha control. Kuthathwa impahla yomnikazi umshini futhi isetshenziswa ukwenza kusebenze imisebenzi kohlelo Ukuvikelwa.
Uyini umsebenzi ukhiye
Isihluthulelo siwukuba iphasiwedi ehlukile ohlelweni. Uma kuyaqapheleka, imoto kungaba isiqalo evamile. Endabeni malungana inani elisele ku kwenzeka. Uma elahlekile ukhiye uchungechunge immobiliser, "Kalina" (noma ezinye imoto - akunandaba) umane ayikwazi ahlala. Ngaphakathi ukhiye ufakwe chip. Kwakuthinta egcinwe kwalo isiginali noma ngekhodi angathola control unit.
Kubalulekile ukuba unakekele ukhiye USB. Uma umnikazi wemoto elahlekile esheyininikhiye immobiliser, yena enzima reprogramming ohlelweni. Lena inqubo eqolo. Ngesikhathi esifanayo ngokuvamile kufanele ushintshe ngokuphelele zonke izingxenye uhlelo, kuhlanganise control unit kanye edluliselwe kagesi.
ukulungiswa abahlukahlukene zedivayisi embuzweni. Kwezinye izimo, idivayisi evumela umhlaseli ukuqala imoto, ngisho ukushayela ibanga elithileko. Kodwa ngemva 200-300 amamitha injini anezinto, futhi umshini ayeke ngokuphelele ephendula iyiphi izinkinobho iziyisikhombisa. Okwakushiwo ukulungisa isenzo itholakala lokuthi ukuthi lowo okonile uyakwazi ukuhamba endaweni engayodwa lapho ukweba. Uya emgwaqweni, obala. Lapha kuba yingozi kakhulu ukuqhubeka ukwenza noma yiluphi zingaphazamisi imoto. Ngokuvamile, isigelekeqe nje ushiya endaweni "kungazelelwe" amise imoto. Nge isimiso esinjalo usebenza immobiliser esheyininikhiye "Santa Fe" ngo-2003. namanye amamodeli imoto.
Ngo ukulungiswa yesimanje esishunyekiwe transponder immobiliser uhlelo. It has izinzuzo ezilandelayo:
It has ezingeni lelisetulu isivikelo ukugqekeza;
Kunciphisa ubungozi obuphathelene nokuntshontshwa cishe zimbalwa;
Isebenza ngesisekelo isimiso wokusebenza non-contact;
ukuvula uhlelo immobiliser kuyinto Fob ukhiye ehlanganisa ikhodi code yinkimbinkimbi eliphezulu;
Ukufundwa ngokuzenzekelayo ikhodi ukhiye bese uvule uhlelo ukuxhumana nomnikazi izimoto ebhokisini edluliselwe.
Izinkinga ezivela ekusebenzeni immobilizers
Ngokuvamile, kuphakama hhayi nobunzima ne immobiliser nokhiye. Kungenzeka trite elahlekile. Kwezinye izimo kukhona Ukufiphalisa ikhodi ngekhodi. Ukuze ugweme izinkinga nedivaysi, kufanele ukhethe imodeli abakhiqizi owaziwa. A option ezinhle immobiliser SmartCode, izindlu esheyininikhiye senziwa high plastic.
Endabeni ka esikhundleni ezinye izingxenye uhlelo zigcinwe isignali non-nje kwaqondana ngekhodi e ukhiye ngakolunye uhlangothi kanti ezinye control unit. inkinga Ikakhulukazi ngokuvamile enjalo kuphakama lapho usebenzisa izingxenye esetshenziswa.
Kungenzeka yini ukuba ngandlela-thile ukuxazulula udaba, uma immobiliser "Starline" Akaliboni charm? Impendulo elula yalowo lo mbuzo akunakwenzeka. Konke kuncike ubunjalo iphutha. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, ezimweni eziningi, umnikazi idivayisi kuyadingeka ukuze afune usizo ochwepheshe. Eziningana kulula ukuxazulula isimo, uma lisebenze ingaphansi iwaranti.
Kuthiwani uma i-okuyiphutha control unit
Isici esiyinhloko kohlelo kuyinto block control. Abanikazi Iningi nezimoto ezifakelwe immobiliser, okungenani kanye abhekane ukuwohloka lokhu engeyokuqala.
Yiziphi izixazululo inkinga?
Ukuthenga control unit entsha, immobiliser Fob kanye edluliselwe kagesi. Kulokhu, uhlelo idivayisi kusukela ekuqaleni futhi ukuhlanganisa kubo ohlelweni. isixazululo enjalo ukuba inkinga izobiza umnikazi imoto ngenani $ 400 nangaphezulu.
Ukuthola kuphela entsha control unit ngaphandle izingxenye ezengeziwe. Ubunzima main itholakala reprogramming zedivayisi ukusebenza evamile nezinye izakhi kohlelo. Inqubo kubenzima, futhi nokuqaliswa kwalo usadinga ukuthola onguchwepheshe oqeqeshiwe. Ukuze umsebenzi wakhe kuyodingeka bakhokhe kancane esingaphansi esimweni sokuqala.
Ukuthenga isethi esetshenziswa izingxenye (block, edluliselwe, chain key). Kulokhu, akukho lutho okudingeka ehlelweni. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze esikhundleni izingxenye oshiwo ngenhla efakwe emshinini uthenge. Ngemva kwalokho sizokwazi ukuqala imoto kwimodi ejwayelekile. Izindleko izixazululo - kusukela $ 200.
Yeka indlela yokuxazulula le nkinga okungcono?
Cishe ingxenye abanikazi izimoto uncamela ukuxazulula inkinga indlela yesibili. Lona khetho nengabizi. izixazululo Ngaphansi - ukusetshenziswa izingxenye esetshenziswa. Akwaziwa ngaphansi kwaziphi izimo ayenyatheliselaphi ngaphambili. Kunzima ukuhlola isimo sabo. Ngakho-ke, akucaci lapho uthenga, kuyoba isikhathi esingakanani ukwazi ukusebenza ngokujwayelekile esetshenziswa control unit, ngaphandle kokudala izinkinga umnikazi wemoto. Kunoma ikuphi, ungalilahli ithemba, uma ngelinye ilanga esheyininikhiye immobiliser Vaz-2110 noma ezinye izimoto lizoyeka ukusebenza njengoba kufanele. ungahlala ukuthola isisombululo. Kudingeka nje ubheke uchwepheshe abanekhono.
Okufanele ukwenze uma nokulahlekelwa Fob ukhiye?
Uma ulahlekelwa Fob ukhiye udinga ukuthenga entsha. Ngemva kwalokho, kumelwe reprogram inqubo control unit. izihlonzi entsha okhiye elondolozwe ku inkumbulo immobiliser, okuyinto kamuva uhlelo bazokubona njengoba evumelekile.
Uma kwakuba khona nenkinga software, kanye chain key immobiliser "Santa Fe" ngo-2003. noma omunye umkhiqizo we-imoto uyayeka ukusebenza, kufanele kabusha ukurekhoda isihlonzi kwimemori e idivayisi inkumbulo. Ngemva kwenziwa le nqubo, uhlelo lizoqhubeka usebenza kwimodi ejwayelekile, futhi umnikazi imoto uzokwazi ukuqhubeka usebenzisa ukhiye ubudala chip.
Indlela tie Multiplex esheyininikhiye kuya immobiliser?
Kunezindlela eziningana ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi. Ukukhetha lincike ohlotsheni kudivayisi. Uma esikhundleni elawulwa kude immobiliser uhlobo Multiplex (izinkinobho ezimbili) seyenziwe, kubalulekile ukwenza ngokuvumelana algorithm ezilandelayo:
Beka khiye ukhiye.
Cindezela inkinobho ukuvala umnyango.
Qalisa turning isihluthulelo kule sikhundla ukuthungela.
Linda imizuzwana 10, bese uyekele inkinobho.
Vala ukuthungela, ukususa ukhiye.
Phinda inqubo (izinyathelo 1-5) Kusukela ezikhathini 1 kuya ku-3.
Le ndlela uyayixazulula inkinga ezimweni eziningi.
Kanjani ukuba ngibophe abanhliziyo Fob ukhiye-inkinobho eyodwa?
Indlela ngenhla asifanele zonke izikhathi. Uma umnikazi imoto ine chain key immobiliser ngokuchofoza okukodwa, kulesi simo, insimbi ngibopha Inqubo kanje.
Kuyadingeka ukuba uhlole ukuthi iminyango yemoto uvalwe ivaliwe. Izikhiye akumele ikhiyiwe.
Okulandelayo, cindezela bese ubamba inkinobho ezinkulu kuze kufike leso sikhathi njengoba diode uyayeka eshaywa.
Lapho umshayeli idedela inkinobho ethi diode kufanele ovuthayo ngokulinganayo.
Emuva kwalokho cindezela inkinobho. LED kufanele siphume.
Ngokulandelayo, umshayeli kumele uvule umnyango ubeke osemqoka ukuthungela.
Ngemva kwalokho, inkinobho ukhiye Fob icindezelwa.
Khona-ke udinga kusebenze ukuthungela bese ulinda imizuzwana okungenani 10.
Manje, ukuthungela kungacinywa.
Ngemva kwemizuzwana engu 5 esheyininikhiye obezakuza msebenzi.
On izimoto zasekhaya ngokuvamile zisebenzisa-inkinobho eyodwa ukhiye Fob immobiliser. "Ngaphambi" nezinye izimoto Russian anemisila lesi simiso ngenxa alula, nokwethenjelwa amanani aphansi. Lutho neze zitha siphazamise imoto ezishibhile, uzochitha isikhathi sokunqoba ngisho bakudala kakhulu zokuvikela.
Ethandwa kakhulu onobuhle immobilizers
Esikhathini sphere zokukhiqiza enikeziwe ngesigaba sedivayisi uye waqaphela yayo abaholi. Ukuze labo zihlanganisa izinkampani ezilandelayo:
Omunye inani kangcono imali inkampani imikhiqizo StarLine. It inikeza izinhlelo elula futhi enokwethenjelwa ukuthi kuyancomeka ngochwepheshe. imodeli yenkampani kuyinto hardware ne-software izingxenye ezingeni eliphezulu. Nale indandatho immobiliser StarLine S770 nezinye ukulungiswa ine design ergonomic. nice Its Esandleni sakho. Upende akusho oblazit, njengoba umkhiqizo azigcina ukubukeka eside lemukelekako.
Okunye okuphawulekayo yilokho SmartCode imikhiqizo yenkampani. Le nkampani elinye lamaphayona umkhakha. ubuchwepheshe yayo evumela ukukhiqiza imishini high-class. Kakhulu akuvamile kuphakama izikhalazo ezivela abashayeli ukuthi ukufaka imoto immobiliser yakhe SmartCode. Ezezindlu esheyininikhiye wenziwe high quality materials. izingxenye ezibizayo electronic asetshenziswa wonke amamodeli. Lokhu kunciphisa amathuba umonakalo esiphansi.
Summer isondo Nokian Hakka Green - ukubuyekezwa kanye izici